कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटना बढेकोप्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन चिन्तित « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटना बढेकोप्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन चिन्तित
प्रकाशित मिति : २०७६, १० फाल्गुन शनिबार १३:०२
चीनसँग स्पष्ट सम्बन्ध नभएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटनाको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कोभिड-१९ का कारण इरानमा थप दुई जनाको मृत्यु भएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका हुन्। इरानमा यसअघि पनि दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।
उनले उक्त भाइरस नियन्त्रण गर्ने अवसर “साँघुरिँदै गएको” टिप्पणी गरे। इरानी अधिकारीहरूका अनुसार इरानका सबै सहरहरूमा उक्त भाइरस फैलिसकेको हुन सक्छ।
कोरोनाभाइरसका कारण दक्षिण कोरियामा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ। चीन र जापानको तटनजिकै क्वारन्टीनमा राखिएको एउटा पानीजहाजबाहेक अन्यत्र दक्षिण कोरियामा कोभिड-१९ भएका मानिसको सङ्ख्या सर्वाधिक छ।
प्रभावित क्षेत्रहरूमा विद्यालय र कार्यालय बन्द गरिने तथा खेलकुदका गतिविधि स्थगित हुने स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्। चीनमा अहिलेसम्म ७५,५६७ जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। तीमध्ये २,२३९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
डा. गेहब्रेयससले चीनबाहिर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका मानिसको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि सङ्क्रमणको तरिका चिन्ताजनकभएको बताएका छन्।
प्रभावित क्षेत्रको यात्रा गरेको वा सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएको जस्ता रोगसँग कुनै स्पष्ट सम्बन्ध नभएका बिरामीको सङ्ख्याका कारण आफूहरू चिन्तित भएको उनले बताए। उनका अनुसार इरानमा भएका मृत्यु र सङ्क्रमणका नयाँ घटना धेरै चिन्ताका विषय हुन्।
तर उनले चीन र अन्य देशले रोग नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरेका उपायका कारण उक्त भाइरसलाई थप फैलिन नदिने सम्भावना भएको टिप्पणी गरे। सम्भावित महामारीसँग सङ्घर्ष गर्न उनले देशहरूलाई थप स्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरे।